ဆီထည့်ထားသော ထရန်စဖော်မာပေါ်တွင် ကျောက်စရစ်ခဲများထည့်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ပါဝါထရန်စဖော်မာများသည် ဆိုးရွားသောဆီယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသည့်နေရာမှ ဆက်တိုက်ယိုဖိတ်မှုများဖြင့် လည်ပတ်နေသဖြင့် ဆီအဆင့်တိုင်းတာမှုတွင် ဆီအဆင့်ကို မမြင်နိုင်တော့ပါ။ ဤအချိန်တွင် ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ဆီဖြည့်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရန် ထရန်စဖော်မာအား ချက်ချင်းရပ်သင့်သည်။ အသွင်ပြောင်းရခြင်းအကြောင်းရင်း...
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း။
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ ခဲအမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ၊ ပါဝါဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာခဲတွင် ကြေးနီဝိုင်ယာအဝိုင်း၊ ကြေးနီဘားနှင့် ကြေးနီဝါယာပျော့များ၊ ခဲလုံးပတ်သည် 12 မီလီမီတာအောက် ကြေးနီဝါယာကြိုးဝိုင်းများရှိသည်။ ခဲ၏ဖြတ်ပိုင်းသည် 80 ~ 100㎜? ကြေးနီဘားကိုသုံးတဲ့အခါ။ ကြေးနီကြိုးပျော့သည်...
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်
21-11-08 တွင် admin မှ
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာသည် ထရန်စဖော်မာဆီဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရေးကြီးသော ပါဝါကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ အသုံးများသော အသုံးချမှုမှာလည်း ပိုများသည်။ ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ လိုင်းသည် ပိုမို၍ အနာဖြစ်နိုင်သည်။ ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာများ ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အကွေ့အကောက်များသော နည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။ ဒါမှမဟုတ်...
ဆီနှစ်မြုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာထုတ်လုပ်သူများ၏ စစ်ဆေးရေးအသိပညာ 1၊ ဝန်လက်ရှိသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ဘောင်အတွင်းမှမဟုတ်ပါ၊ ပြင်းထန်သောပြောင်းလဲမှုမရှိပါ၊ လည်ပတ်ဗို့အား ပုံမှန်မဟုတ်ပေ။ 2၊ ဆီအဆင့်၊ ဆီအရောင်၊ အပူချိန်သည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိပါ၊ ဆီယိုစိမ့်မှုဖြစ်စဉ်မရှိပါ...
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ အူတိုင်ကို ရုတ်သိမ်းခြင်း။
Oil-immersed transformer core သည် အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် oil-immersed transformer အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး oil-immersed transformer core သည် အရေးကြီးသောလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး oil-immersed transformer core သည် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှုများရှိပြီး၊ oil-immersed transformer core ၏အဓိကလည်ပတ်မှုအတွက်လည်းကောင်း၊ အဓိက ခြေလှမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။ ငါတို့...
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ ဝန်နှုန်း
ပင်မထရန်စဖော်မာ နှစ်လုံးထက်ပို၍ သတ်မှတ်သောအခါ၊ ပင်မထရန်စဖော်မာတစ်ခု၏ ပါဝါချို့ယွင်းမှုအလိုက် စွမ်းရည်တစ်ခုစီကို ရွေးချယ်ပါ။ ကျန်ရှိသောပမာဏသည် မူလဝန် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ စုစုပေါင်းဝန်၏ အနည်းဆုံး 60-75% ကို အာမခံနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် 75% ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် 60% သာမညဓာတ်အားခွဲရုံများကို အသုံးပြုပါသည်။...
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော transformer ၏ အပြန်အလှန် inductance ဗို့အား
အမည်တူ ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ ဂိတ်သည် ကွိုင်ထဲသို့ စီးဆင်းနေသော inductance လျှပ်စီးကြောင်း၏ terminal နှင့် အခြား coil ရှိ အပြန်အလှန် inductance ဗို့အား၏ အပြုသဘောဆောင်သော ဝင်ရိုးစွန်းဂိတ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည် ကွိုင်များနှင့်...
2500KVA ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ
21-10-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ထုတ်ကုန်နိဒါန်း- ဤထုတ်ကုန်၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်-load loss, low-load current, low noise, power saving effect သည် ထူးခြားသည်။ ဗို့အားအရည်အသွေးနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာသည့် စက်ကိရိယာများ၊ မြို့ပြနှင့် ru...
21-10-20 ရက်နေ့တွင် admin မှ
S11-M-250/10 ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ
ဆီနှစ်မြှုပ်ထားသော အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်ဖြန့်ချီထားသော ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများသည် S9 ထရန်စဖော်မာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက S11 ထရန်စဖော်မာ၏ ဝန်အားမရှိသောဆုံးရှုံးမှုသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 30% ခန့် လျော့ကျသွားသည်။ ဆလင်ဒါ သို့မဟုတ် ခရုပတ်ဖွဲ့စည်းပုံအကွာအဝေးတွင် 630 ~ 2500kVA ဗို့အားနိမ့်အကွေ့အကောက်များ စွမ်းရည်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ...
I. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော သုံးဆင့်ဆီနှစ်မြှုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် ထရန်စဖော်မာသည် ဝါယာရှော့ခံနိုင်ရည်အား မြှင့်တင်ရန် လျှပ်ကာဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကို လက်ခံပါသည်။ သံအူတိုင်ကို အရည်အသွေးမြင့် အအေးခံထားသော ဆီလီကွန်စတီးစာရွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ High voltage winding များကို high qu...
1000KVA အခြောက်-အမျိုးအစား ထရန်စဖော်မာ
1000KVA dry type transformer ၏ထူးခြားချက်များ 1. ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ အားကောင်းသော ပါဝါချွေတာခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ လည်ပတ်မှုတွင် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးခြင်း။၂။ မီးမွှန်စေခြင်း၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော၊ ဝန်တင်စင်တာတွင် လူစုခွဲနိုင်သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ 3. Local discharge power လျော့နည်း t...